Akụkọ - Labelexpo Europe 2021 iji weghachite ụlọ ọrụ nyocha
Labelexpo Europe 2021 iji mee ka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ laghachi azụ
Tarsus Group, onye nhazi Labelexpo Europe, na-eme atụmatụ ịwepụta ihe ngosi ya kachasị nwee mmasị ruo ụbọchị n'otu afọ site ugbu a, na-eweghachi ụlọ ọrụ ụwa ọnụ mgbe nsogbu ndị Covid-19 gbasasịrị.
Lisa Milburn, onye isi oche njikwa nke Labelexpo Global Series. 'Labelexpo Europe 2021 na-ekwe nkwa iji gosipụta ọhụụ ọhụụ ọhụụ na akara na ngwugwu ngwugwu. N'iji igwe eji arụ ọrụ na-egosi teknụzụ ọgbara ọhụrụ, usoro imepụta yana mpaghara njirimara, Labelexpo ga-eweta ọdịnihu nke ụlọ ọrụ ahụ na ndụ.
Thelọ ọrụ ahụ na-atụ anya ka anyị mee nke a kachasị mma, na nke kachasị nchebe, na-egosi mgbe ọ bụla, anyị ga-anapụta. Ahụike na nchekwa nke ndị ngosi na ndị ọbịa bụ ihe kachasị anyị mkpa, ọrụ siri ike na-aga n'ihu ugbu a iji hụ na emezuru nke a.
'Na mbu, Brussels Expo etinyela aka na usoro nzacha ikuku na nlọghachite nke ụwa nke pụtara na ikuku dị n'ime ụlọ nzukọ ahụ dị ka ikuku ikuku n'èzí. Ma dị ka anyị maara ugbu a, nke a bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi na ịkwụsị nnyefe nke Covid-19. '
Ndị otu Tarsus 'Labelexpo Europe 2021 na-arụ ọrụ ugbu a na-ahọpụta ndị ọrụ ngo, na-ehicha ma na-enye ndị na-eweta ọrụ ga-etinye ụkpụrụ nchekwa kachasị elu n'oge ngosi ahụ n'onwe ya, yana n'oge nkwalite na mmebi.
Otu atụmatụ dị oke egwu nke gosipụtara ihe ọhụụ ọhụụ na ngwugwu na-agbanwe agbanwe ka edobere ndị ọbịa ihe nkiri ahụ n'afọ ọzọ.
Chris Ellison, onye isi njikwa, OPM Labels na Packaging Group na onye isi Finat, kwuru, sị: 'Enwere naanị ọtụtụ ihe ị nwere ike ime ma mụta n'ịntanetị. Ihe m na-efu n'ezie bụ ụlọ ọrụ na-azụ ahịa ị nwetara site na ngosipụta nke ụwa na-egosi, ọ bụghị naanị ịhụ ụzọ ọhụụ ọhụụ ọhụụ na-atọ ụtọ sitere n'aka ndị na-eweta ngwaahịa ụwa na-akpali mmụọ nsọ, kamakwa ị na-ezute ndị enyi ochie na ịme kọntaktị ọhụrụ na nchekwa gburugburu ebe obibi.
Ndị na-enye ha kwughachiri echiche ndị a. Sarah Harriman, onye njikwa ahia na nkwukọrịta na Ngwaahịa Pulse Roll Label kwuru, sị: 'Ọtụtụ agbanweela gburugburu ụwa ebe anyị nọ na Brussels n'afọ gara aga. Agbanyeghị, ka ọnwa iri na abụọ ga-aga, anyị nwere olile anya ma nwee nchekwube banyere atụmatụ iji weta ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ na ngwugwu ngwugwu n'enweghị nsogbu maka Labelexpo Europe 2021. Anyị na-atụ anya na ihe nwere ike ịdị iche maka ndị ngosi na ndị ọbịa, mana anyị nabata, ma na-atụ anya, ohere izute ndị ahịa anyị, ndị ahịa nwere ike, ndị mmekọ na ndị enyi ụlọ ọrụ na mmadụ ọzọ na Septemba ọzọ maka ngosi ngosi kachasị ukwuu n'ụwa.
Uffe Nielsen, onye isi oche Grafisk Maskinfabrik kwukwara, sị: 'Ọnwa ole na ole gara aga ebutela nnukwu mgbanwe n'omume ndị na-azụ ahịa, dịka ịba ụba nri n'ụlọ, azụmahịa azụmahịa na ihe ndị ọzọ. Nke a na nke a emeela ka nnkwu ibu maka aha. Site na usoro aga n'ihu, ọdịnihu nke GM, yana ahịa akara ala, na-ele anya nke ukwuu. Ka nke ahụ wee mee n'agbanyeghị, ọ dị mkpa na anyị nwere ohere ịbịakọta ọnụ na ụlọ ọrụ na ahụmịhe ngosi ahia ahia.
'Enweghị m ike imesi oke mkpa Labelexpo Europe 2021 ga-adị, dị ka ikpo okwu zuru ụwa ọnụ na-enweghị oke iji kesaa ihe ọmụma, ihe ọhụrụ na teknụzụ nke bụ isi ihe na-eme ka ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'oge ndị a na-enweghị atụ. Ndị na-eweta ngwaahịa na ndị nrụpụta niile kwesịrị itinye aka na Labelexpo Europe 2021 wee mee ka ụlọ ọrụ na-aga n'ihu.
Filip Weymans, osote onye isi oche nke nkwukọrịta ahịa na Xeikon kwuru, sị: 'Ọ dịghị ihe ngosi ọzọ nwere otu ike na ume, nke na-azụlite njikọ nke na-eweta ọhụụ na azụmaahịa. Ekwuru m na mbụ, Labelexpo Europe bụ etiti nke nnukwu mpo maka ụlọ ọrụ akara ma anyị na-atụ anya itinye aka na ụlọ ọrụ ahụ ọzọ.